स्थानीय चुनाव : भरतपुर महानगरपालिका विशेष
चितवन | बैशाख २३, २०७९
विमल गौतम / सुशील पन्त
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी नेत्री रेनु दाहाल उम्मेदवार छिन् ।
भरतपुर महानगरमा हुने चुनावको नतिजासँग सत्ता गठबन्धनको भविष्य जोडिएकाले पनि यहाँको चुनावलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएकी रेनुसँग उनको चुनावी एजेण्डा र चुनौतीबारे लोकान्तरले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
भरतपुर महानगरको दोस्रो कार्यकालको लागि प्रतिष्पर्धामा हुनुहुन्छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
विकासका लागि रेनु दाहाल चाहिन्छ भन्ने मतदाताको प्रतिक्रिया छ । मतदाताहरूबाट पाएको सुझावले म उत्साही छु । चुनाव घोषणा भएदेखि नै फेरि रेनु आउनुपर्छ भन्ने भरतपुरवासीको भावना मैले पाएकी छु ।
व्यक्तिगतसँगै विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि भरतपुरको विकासको निरन्तरताका लागि फेरि एकपटक रेनु आउनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । मेरो पक्षमा माहोल र उत्साह बनेको छ ।
तपाईंहरूले जोसँग चुनावी गठबन्धन गर्नुभयो, त्यो कांग्रेसभित्र तपाईंको उम्मेदवारीलाई लिएर असन्तुष्टि देखियो नि !
असन्तुष्टि देखियो । स्वतन्त्र (बागी) उम्मेदवारी पर्‍यो । सम्बन्धित पार्टीले उहाँलाई कारवाही पनि गरिसकेको छ । मलाई के विश्वास छ भने कांग्रेसका नेताहरू तालमेलप्रति पूरै इमान्दार हुनुहुन्छ । बागी उठ्नेको हविगत चुनावमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले विगतदेखि नै देख्दै आएको हो । उहाँ नउठेको भए भरतपुरमा सर्वसम्मत जस्तो हुने थियो ।
बागीबाहेक अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताले तपाईंलाई इमान्दारीपूर्वक भोट हाल्छन् ?
एउटै पार्टीभित्र त असन्तुष्टि हुन्छ भने म फरक पार्टीको, गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएँ । कतै असन्तुष्टि भएछ भने पनि कांग्रेसका नेताहरूले इमान्दारीपूर्वक भोट हाल्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । अलिअलि भोट बाहिर जाला, त्यसले मलाई खासै घाटा पुग्ने देख्दिनँ । पार्टी केन्द्र र जिल्लाले गरेको तालमेल हो । विगतको चुनावमा भरतपुरमा मात्र गठबन्धन थियो । यसपटक जिल्लाका ९८ वडामै गठबन्धन गरेकाले वडा सदस्य समेतमा सहमति गरेर अगाडि बढ्दा विगतभन्दा परिस्थिति फरक छ ।
गठबन्धन त एकातिर भयो तर तपाईंको मुख्य प्रतिस्पर्धी विजय सुवेदी पनि यहाँ जनमानसमा भिजेको नेता हुनुहुँदोरहेछ । कतिको चुनौती ठान्नुभएको छ ?
उहाँ शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । त्यो बाहेक प्रदेश सभामा सांसद र मन्त्री हुनुभयो, उहाँले के विकास गर्नुभयो त यहाँ ? विकास र कामले परिचित हुनुहुन्न । मात्र शालीन व्यक्तिको पहिचान छ । शालीनताले मात्र सबै चिज हुन्छ र ? यो देशमा शालीन र धार्मिक व्यक्तित्वको कमी छ र ? समग्र महानगरको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा शालीनताले मात्र पूरा गर्न सकिन्न । यहाँका जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न यहाँको बजेटले मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारसँगको पहुँच, सक्रिय पहल, दृढ इच्छाशक्ति सबै भएको हुनुपर्छ ।
सांसद हुँदा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केही गर्न नसक्नुभएको नेताले महानगरको यत्रो महासागरमा के गर्नुहोला ? अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र सडक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाउनु पर्नेछ । धेरै कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । हामीभन्दा माथिको सरकारसँग सक्रिय पहल गर्ने कुरा छन्, सामान्य ढंगले सोचेर सम्भव छैन । उहाँलाई बलियो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा लिएको छैन । किनकी, जनताको नजरमा म परीक्षण भएँ ।
महानगरको कसैले भन्न सक्नुहुन्न कि रेनु दाहालले काम गर्न सकेन, सुशासन कायम गरेन, भ्रष्टाचार भयो भनेर । यस विषयमा कसैले चुनौती दिएको छैन । एउटा महिला, प्रचण्डकी छोरी, काम गर्ली कि नगर्ली भन्ने आमप्रश्न थियो विगतमा । आफ्नो कर्म र व्यवहारले त्यसलाई जवाफ दिइसकेकी छु । यसर्थ मैले परीक्षामा १०० प्रतिशत त नभनौं डिस्टिंक्सनचाहिँ ल्याएको छु ।
भरतपुरको भविष्य सुन्दर छ । यसको सम्भावना छ । केही पूर्वाधार तयार गरेका छौं । फाउन्डेसन बनाएका छौं । यसलाई देशकै गौरव गर्नलायक महानगर र दक्षिण एसियाली मापदण्ड पूरा गरेको शहर बनाउनका लागि फाउन्डेसन तयार गरेका छौं । यसलाई निरन्तता दिने र सम्पन्न गर्ने दायित्व मैले पाएमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेछु ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई पूरा गर्ने कुरा पनि छन् । समय सकिँदै गर्दा नारायणी तटबन्धलाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाएका छौं । पाँच वर्षमा महानगरको आन्तरिक स्रोत २० अर्ब थियो होला ३० अर्बभन्दा बढी हामीले केन्द्र सरकारबाट बजेट ल्याएर पूर्वाधार विकास गरेका छौं ।
हिजो पनि जनप्रतिनिधि थिए, तर विकास किन भएन ? अहिले किन भयो ? कसैको दया मायाले होइन नि, हामीले सक्रिय पहल गरेर भएको हो । हामीले अविभावक पायौं । यो देशको परिवर्तनका मुख्य नेतृत्व राजनेता कमरेड प्रचण्ड पायौं । उहाँ अभिभावक बन्दा विकास गर्न सहज भयो । महानगरपालिकामा हामीले सोचेभन्दा राम्रो विकास गर्न सफल भएका छौं । त्यसले गर्दा मेरो उम्मेदवारी विकासको कामलाई निरन्तरता दिन र भरतपुरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्नका लागि हो ।
पहिलोपटक आउदा तपाईंलाई टुरिस्ट उम्मेदवार भनिएको थियो । यसपटक कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
हो, पहिलोपटक आउँँदा त्यसो भनियो । यसपटक मैले प्रचण्डपुत्री या टुरिस्ट उम्मेदवार भन्ने आरोप खेप्नुपरेको छैन ।
त्यतिबेला प्रचण्डकी छोरी, यो फुच्ची केटीले गर्न सक्ली कि नसक्ली भन्ने आमटिकाटिप्प्णी थियो । भर्खरै म यहाँका व्यवसायीको अन्तरक्रियामा थिएँ, उहाँहरूले सोध्नुभयो– तपाईंले यत्रो पहल कसरी लिनुभयो ? आज मैले कामले, व्यवहारले त्यसको जवाफ दिएको छु । त्यसकारण प्रचण्डपुत्री वा टुरिस्ट भन्ने छैन । आम भरतपुरवासीको चाहना एकपटक फेरि रेनु दाहाल भन्ने छ ।
चुनाव महंगो भयो भन्ने छ, कति खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
न्युनतम परिचालन गर्नेबाहेक केही खर्च गरेको छैन । न्युनतम गर्नेबारे सोचेको छु । चुनाव खर्चका लागि मैले कसैसँग पैसा मागेको छैन । माग्नेवाला पनि छैन । पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने योजना हामीले बनाएका छैनौं ।
दोहोरिएर जित्नुभयो भने पाँच वर्षपछि भरतपुरमा के परिवर्तन देख्न पाइनेछ ?
भरतपुरमा धेरै परिवर्तन पाउनुहुनेछ । निर्माणको काम तीव्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिटी हल, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिक्रेट रंगशाला बनाउँदैछौं । नारायणी किनारलाई सिविज मोडलमा विकास गर्दैछौं । मुख्य सडकलाई सौन्दर्यसहितको सडक बनाउँदैछौं । पुल्चोक गोन्द्राङ सडकलाई हरियालीसहितको सडक र लाइटिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक बनाउँछौं । ५ वर्षमा ६ सय २२ किमी सडक पिच गरेका छौं । सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पहिलो जोड दियो ।
आन्तरिक आयबाट शिक्षामा १५ प्रतिशत लगानी गरेका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा ७ हजार विद्यार्थी बढाउन सफल भएका छौं । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न यन्त्र उपकरण दिने कार्यक्रम र दूधमा अनुदान दिएका छौं ।
अहिले शुरू भएका काम पूरा गर्दा भरतपुर देशकै नमूना र स्मार्ट सिटी बन्छ । यो देशका अन्य नगर र शहरका लागि समेत विकासमा नमूना र रोल मोडल शहर बन्नेछ ।
गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने क्षमता बोकेको भरतपुर महानगरको 'ग्राउन्ड जिरो'
डोटीमा २५ सय सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा खटिने
राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र आगामी चुनावी रणनीति बनाउने काममा व्यस्त छन् । स्थानीय तह चुनावबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसभित्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबारे अनौपचारिक छलफल शु...
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र सैन्य सहयोग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)को विरोधमा 'फ्रन्टलाइन'मा उभिने...